နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB ကို အသုံးပြု၍ ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် အမှာစာ များ တိုးလာ သည် - Pandaily
နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB ကို အသုံးပြု၍ ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် အမှာစာ များ တိုးလာ သည်
Feb 08, 2022, 21:15ညနေ 2022/02/08 23:08:20 Pandaily
၂၀ ၂၂ ခုနှစ် နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB ရှေ့ပြေး နေရာ ၁၂ ခုမှ နိုင်ငံသား များသည် ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေကြေး လျှော့စျေး ပုံစံ အသစ်ကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စွာ အသုံးပြု နိုင်ခဲ့သည်။ တနင်္လာနေ့တွင် နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် ခုနစ် ရက်အတွင်း ၊အမေရိကန် အုပ်စု အပေါ် နေ့စဉ် ပျမ်းမျှ RMB ငွေပေးငွေယူ အရေအတွက်ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် မတိုင်မီ တစ်ပတ် တွင် ၅၆. ၄% တိုးတက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် အုပ်စု ၏ပျမ်းမျှ RMB အရောင်းအ ၀ ယ် ပမာဏသည် ယခင် သီတင်းပတ် ထက် ၆၈. ၅၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Digital Renminbi Pilot ၏ နယ်ပယ် ကျယ်ပြန့် လာသည်နှင့်အမျှ ရှေ့ပြေး မြို့ပြ ဒေသများရှိ စားသုံး သူများသည် အွန်လိုင်း နှင့် အော့ ဖ် လိုင်း ငွေပေးချေ မှုအတွက် Digital Renminbi ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤ အားလပ်ရက် သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB ပါ ၀ င်သည့် ပထမဆုံး အကြီးစား နွေ ဦး ရာသီ စားသုံးမှု ရာသီ လည်းဖြစ်သည်။
နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း Meituan သည် ထောက်ပံ့ ရေးနှင့် စားသုံးမှု ကိုမြှင့်တင်ရန် အစီအမံ များစွာ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Meituan ၏ “flash shopping” ၀ န်ဆောင်မှုကို နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း စားသုံး သူများ နှစ်သက် သော အချိုရည် များ၊ သစ်သီး ဖျော်ရည် များနှင့်အခြား ထုတ်ကုန်များ ထောက်ပံ့ ရန်အတွက် နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း အွန်လိုင်း တွင် စတင်ခဲ့သည်။ Meituan Outer Buy သည် “Spring Festival Shopping Experience” ကို စတင်ခဲ့ပြီး စားသုံး သူများအား ရွေးချယ်စရာ အမျိုး မျိုးနှင့် မိနစ် ၃၀ ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။
အမျိုးမျိုးသော အနီရောင် စာအိတ် များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒေါ်လာ များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ များသည် နွေ ဦး ရာသီ တစ်လျှောက်လုံး စားသုံး မှုကို တိုးပွားစေသည်။ အားလပ်ရက် များအတွင်း ကုန် စုံ နှင့် စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB အရောင်းအ ၀ ယ် များသည် အထူးသဖြင့် တက်ကြွ ကြောင်း အမေရိကန် အဖွဲ့ ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန် စုံ အမှာစာ များအတွက် နေ့စဉ် RMB အရောင်းအ ၀ ယ် အရေအတွက်သည် အားလပ်ရက် မတိုင်မီ တစ်ပတ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀% ခန့် တိုးတက်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင် ကြည့် ခြင်းသည် နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း အကြိုက်ဆုံး ဖျော်ဖြေရေး ရွေးချယ်မှု များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖျော်ဖြေ ရေးလုပ်ငန်း အတွက် ကပ် ရောဂါ မှ ပြန်လည် ထူ ထော င်ရန် အရေးကြီးသော အခွင့်အလမ်း တစ်ခု လည်းဖြစ်သည်။ ပြည်နယ် ရုပ်ရှင် အုပ်ချုပ်ရေး မှ ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံး စာရင်းဇယား များအရ နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း တရုတ် ရုပ်ရှင်၏ Box Office သည်ယွမ် ၆. ၀ ၃၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ၄၈ သန်း) ကျော် ခဲ့သည်။
နှစ်သစ်ကူး အကြို ရုပ်ရှင် ကိုမ ထုတ်လွှင့် မီ Meituan သည် ရုပ်ရှင် ဖျော်ဖြေပွဲ များအတွက် ဒီဂျစ်တယ် RMB ငွေပေးချေမှု လမ်းကြောင်း ကိုအပြည့်အဝ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ပရိသတ် များပိုမို ဆွဲ ဆော င်ရန် အထူး လျှော့စျေး ကူပွန် များ ထုတ် ပေးခဲ့သည်။ ကိန်းဂဏန်းများအရ နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း အမေရိကန် အုပ်စုရှိ ရုပ်ရှင် များတွင် နေ့စဉ် RMB အရောင်းအ ၀ ယ် အရေအတွက်သည် ပွဲတော် မတိုင်မီ တစ်ပတ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် လေး ဆ ကျော် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
Meituan သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် RMB ငွေပေးချေမှု လမ်းကြောင်း ကိုဖွင့် သည်
တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ရှေ့ပြေး မြို့ကြီး များမှ နေထိုင် သူများသည် အစားအစာ များ ထုတ်ယူ သောအခါ အစားအစာ အတွက် ဒီဂျစ်တယ် RMB ကိုသုံး နိုင်သည်အလှအပ အဖွဲ့.